galmudugnews.com » AMISOM oo laga codsaday iney wax ka qabtaan ciidamada dowlada ee dhaca baahsan ka wada Sh/hoose
Home » WARARKA » AMISOM oo laga codsaday iney wax ka qabtaan ciidamada dowlada ee dhaca baahsan ka wada Sh/hoose AMISOM oo laga codsaday iney wax ka qabtaan ciidamada dowlada ee dhaca baahsan ka wada Sh/hoose galmudug on
No Comment Views 16206Maamulka gobolka Sh/hoose ayaa qeylo dhaan xoogan ka soo saaray ciidamo ka tirsan dowlada Somalia oo dhac baahsan ka wada degaano badan oo ka tirsan gobolkaas kuwaasoo aysan jirin cid ay ka amar qaataan.
“Waxaan cabasho gaarsiinay laamaha amaanka dowlada sida wasaarada arimaha gudaha talisyada ciidamada nabad sugida, booliska iyo milateriga, hase ahaatee ilaa hadda ma heyno cid dhibaatooyinkaas wax ka qabatay, waxaana ka codsaneynaa ciidamada AMISOM iney wax ka qabtaan askarta dhaca bareerka ah geysaneysa.
Hadalka Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arimaha bulshada ee maamulka Sh/hoose Maxamed Cumar Carabey ayaa ku soo aadaya xili amaanka qeybo ka mid ah gobolkaas uu faraha ka baxay ka dib markii ciidamada dowlada ay bilaabeen iney boobaan wixii ay arkaan, iyadoo wadada isku xirta degmooyinka Marka iyo Afgooye shalay lagu baartay laguna dhacay lix gaari oo rakaab ah kuwaasoo dadkii la socday laga qaatay wixii ahnti ahaa ee wateen.
Xaalada wadada isku xirta degmooyinka Marka iyo afgooye ayaa noqotay maalmihii ugu dambeeyey mid aad u cabsi badan oo khal khal badan uu ka taagan yahay amaankeeda, waxaana gaadiidka qaar au bilaabeen iney ka wareegtaan wadadaas iyagoo isticmaalaya wadooyin qardo jeex ah si ay uga badbaadaan ciidamada dowlada ee wixii ay arkaanba il iyo aragti ku dhacaya.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21000 hitsContact US - 19630 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15697 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 14548 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13888 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13828 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13808 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 12861 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11754 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11686 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11671 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11504 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11496 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11327 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11165 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11035 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11030 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11004 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10563 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10325 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10075 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 9982 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 9870 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9804 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9756 hits Home About